အသငျးဟောငျးကို ကြေးဇူးတငျနှုတျဆကျစကားဆိုခဲ့တဲ့ သရဲနီသဈ ဒီယာလို – Premier League Special
ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ဆယျကြျောသကျ တောငျပံကစားသမားသဈ အာမတျဒီယာလိုဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့ပွီးတဲ့နောကျ သူ့ရဲ့ အသငျးဟောငျး အတ်တလနျတာကို ကြေးဇူးတငျနှုတျဆကျစကားဆိုခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ အသကျ(၁၈)နှဈသာရှိသေးတဲ့ အိုငျဗရီကို့ဈလူငယျကွယျပှငျ့ ဒီယာလိုကို ပွီးခဲ့တဲ့ကွာသပတေးနကေ့ (၄)နှဈခှဲစာခြုပျနဲ့ ချေါယူခဲ့ပွီး သူ့အတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးပေါငျ(၃၇)သနျးအထိ ပေးခခြေဲ့ရပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဒီယာလိုအတှကျ အတ်တလနျတာအသငျးကို ပေါငျ(၁၉)သနျး အရငျဆုံးပေးခဲ့ရသလို ကစားသမားရဲ့ ခွစှေမျးနဲ့ အောငျမွငျမှုအပျေါ မူတညျပွီး နောကျထပျ ပေါငျ(၁၈)သနျး ပေးခရြေမှာပါ။
အီတလီ အောကျတနျးကလပျတဈခုဖွဈတဲ့ Boca Barco လူငယျအသငျးနဲ့အတူ ဘောလုံးသမားဘဝစတငျခဲ့တဲ့ ဒီယာလိုကို စီးရီးအကေလပျတှကေ မကျြစိကခြဲ့သလို ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာတော့ အတ်တလနျတာလူငယျအသငျးဆီ ရောကျရှိခဲ့ပွီး (၄)နှဈအကွာမှာ စီနီယာအသငျးအတှကျ ပှဲထှကျခှငျ့ ရခဲ့ပါတယျ။
ဒီယာလိုဟာ အတ်တလနျတာအသငျးကွီးအတှကျ စုစုပေါငျး(၅)ပှဲသာ ကစားခဲ့ရပမေယျ့လညျး သူ့ရဲ့အလားအလာရှိတဲ့ ခွစှေမျးခွစေကွောငျ့ ယူနိုကျတကျအသငျးက ချေါယူဖုိ့ ဆုံွးတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့ပွီးတဲ့နောကျ သူ့ရဲ့ Twitter စာမကျြနှာမှာ ဒီယာလိုက “လေးစားရပါတဲ့ အတ်တလနျတာ ပရိသတျကွီးရေ . .အခုအခြိနျကတော့ အသငျးနဲ့ ကြှနျတျော နှုတျဆကျစကားဆိုရမယျ့အခြိနျကို ရောကျလာခဲ့ပါပွီ။ အတ်တလနျတာအသငျးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ (၆)နှဈတာကာလဟာ တကယျ့ကို မယုံနိုငျစရာကောငျးတဲ့ အခြိနျတှဖွေဈခဲ့ပွီး စိနျချေါမှုတှအေပွငျ ကြှနျတေျာ့ဘ၀ တိုးတကျလာအောငျ အသငျးက ကူညီပေးခဲ့သလို ပြျောရှငျမှု၊ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေိုလညျး ပိုငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ ဒီအသငျးက ကြှနျတေျာ့ကို လူကွီးတဈယောကျဖွဈလာအောငျ သငျကွားပွသခဲ့သလို ကြှနျတျောဖွဈစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒတှကေိုလညျး ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့တယျ။ အတ်တလနျတာအသငျးမှာ ကစားခှငျ့ရခဲ့တဲ့အတှကျ အရမျးကို ဂုဏျယူမိပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ နှလုံးသားတဈနရောမှာ အတ်တလနျတာအသငျးနဲ့ ပရိသတျတှေ အမွဲရှိနမှောဖွဈပွီး ဘယျအခြိနျမှာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာ အမွဲတမျးအမှတျရနမှောပါ”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် တောင်ပံကစားသမားသစ် အာမတ်ဒီယာလိုဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သူ့ရဲ့ အသင်းဟောင်း အတ္တလန်တာကို ကျေးဇူးတင်နှုတ်ဆက်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အသက်(၁၈)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ အိုင်ဗရီကို့စ်လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဒီယာလိုကို ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့က (၄)နှစ်ခွဲစာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး သူ့အတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်(၃၇)သန်းအထိ ပေးချေခဲ့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီယာလိုအတွက် အတ္တလန်တာအသင်းကို ပေါင်(၁၉)သန်း အရင်ဆုံးပေးခဲ့ရသလို ကစားသမားရဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး နောက်ထပ် ပေါင်(၁၈)သန်း ပေးချေရမှာပါ။
အီတလီ အောက်တန်းကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Boca Barco လူငယ်အသင်းနဲ့အတူ ဘောလုံးသမားဘဝစတင်ခဲ့တဲ့ ဒီယာလိုကို စီးရီးအေကလပ်တွေက မျက်စိကျခဲ့သလို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ အတ္တလန်တာလူငယ်အသင်းဆီ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး (၄)နှစ်အကြာမှာ စီနီယာအသင်းအတွက် ပွဲထွက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီယာလိုဟာ အတ္တလန်တာအသင်းကြီးအတွက် စုစုပေါင်း(၅)ပွဲသာ ကစားခဲ့ရပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့အလားအလာရှိတဲ့ ခြေစွမ်းခြေစကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်းက ခေါ်ယူဖုိ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ဒီယာလိုက “လေးစားရပါတဲ့ အတ္တလန်တာ ပရိသတ်ကြီးရေ . .အခုအချိန်ကတော့ အသင်းနဲ့ ကျွန်တော် နှုတ်ဆက်စကားဆိုရမယ့်အချိန်ကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ အတ္တလန်တာအသင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ (၆)နှစ်တာကာလဟာ တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေအပြင် ကျွန်တော့်ဘ၀ တိုးတက်လာအောင် အသင်းက ကူညီပေးခဲ့သလို ပျော်ရွှင်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအသင်းက ကျွန်တော့်ကို လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် သင်ကြားပြသခဲ့သလို ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်။ အတ္တလန်တာအသင်းမှာ ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နှလုံးသားတစ်နေရာမှာ အတ္တလန်တာအသင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေ အမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာပါ”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။